မင်းသားလေး (Audiobook) | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ဒီနေ့ယူလာပေးမယ် ငါ့ကလေးဘဝကိုမှတ်သားထားတဲ့စာအုပ်ရဲ့အော်ဒီယိုစာအုပ် manyကန်အမှန်အများသောသူတို့၏။ အကြောင်းဖြစ်သည် မင်းသားလေး ကျွန်ုပ်တို့သတင်းအချက်အလက်ရှိသည့်အခါ Antoine de Saint-Exupéryကပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏မှတ်ဥာဏ်ကိုယူဆောင်လာသည် ငါ EGB သို့သွား၏, ငါ့ကလေးဘဝအမှတ်တရများအပြည့်အဝဘလော့ဂ်။
ချစ်ခင်တွယ်တာမှု၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနှင့်ကြီးကျယ်သောဉာဏ်ပညာစသည့်မသေနိုင်သောစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကလေးများအားပြောပြရန်အလွန်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းဖြစ်သည် (၆ နှစ်) ။ သဲကန္တာရအလယ်တွင်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည့်လေယာဉ်မှူးနှင့် The Little Prince ဟုခေါ်သည့်ထူးဆန်းသည့်ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး အကြားစကားပြောဆိုမှုကိုဖော်ပြသည်။ ဒီကလေးသည်သူနေထိုင်ရာအခြားဂြိုလ်များ၌သူနှင့်သူ၏ဇာတ်ကောင်များအကြောင်းကိုသူ့အားပြောပြခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်လူအများစု၏စိတ်ပျက်ဖွယ်သဘောထားများကိုနားလည်သဘောပေါက်စေသောလူ့ဘ ၀ ၏ချို့ယွင်းချက်များကိုဖြတ်သန်းသွားခြင်း။
၎င်းသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာဖတ်သောစာအုပ်ဖြစ်သည် (စာမျက်နှာ ၉၀ ပါ ၀ င်သည်) မင်းရဲ့အော်ဒီယိုစာအုပ်ဟာ ၅၂ မိနစ်ကြာတယ်။ YouTube မှာဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တင်ထားတဲ့ Audiobook ကိုထားခဲ့ပါ။ အသံဖိုင်နဲ့ပါတဲ့ Ivoox player ကိုလည်းချန်ထားပါတယ်။
၎င်းကိုကူးယူလိုပါကသင်၏ cursor ကိုထည့်ပါ
option ကိုရွေးချယ်ပါ "Link ကိုသိမ်းပါ"
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » Audio » မင်းသားလေး (Audiobook)
မင်္ဂလာပါ မင်းသားလေးရဲ့ဒီအော်ဒီယိုစာအုပ်ကိုရှာတွေ့တာကဒီမနက်မှာအဖိုးတန်လက်ဆောင်တစ်ခုပဲ။ ကောင်းလိုက်တာ!
ကျွန်တော့်စာပေသင်ကြားပေးသူကကျွန်တော်တို့ကိုအထက်တန်းကျောင်းက Little Prince ကိုဖတ်စေပြီး၊ ဖတ်ပြီးသားဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးသိတဲ့ငါတို့အများစုက "ကလေးစာအုပ်" လို့ယူမှတ်ကြတယ်။ ကျနော်တို့ချက်ချင်းကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်, ငါတို့အဘို့မိမိတို့အသက်ကြီးလွန်းစဉ်းစားမိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကဒါကိုမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောတယ်။ ထိုအချိန်ကမင်းသားလေးအားပြန်လည်ဖတ်ရှုခြင်းသည်သူ့ကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်သည်။
သူကကျွန်မတို့ကိုအတင်းအကျပ်မခိုင်းနိုင်ပေမယ့်အနည်းဆုံးငါးနှစ်တခါထပ်မံဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်၊ နောက်စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့တူတဲ့အခါတိုင်း၊ ငါတို့ကမတူကွဲပြားတဲ့အရာတွေကိုနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့သူကငါတို့ပြီးသွားတဲ့အခါဆရာကပြောတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ဇာတ်ကောင်အသစ်နှင့်အတူစာနာ။
ငါ့ဆရာကမှန်တယ် ကျွန်ုပ်တို့ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီးဤစာအုပ်တွင်ဇာတ်ကောင်များစွာနှင့်ခံစားချက်များစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်သင်ဖတ်သည့်အခါတိုင်းသင်ယခင်ကနားမလည်ခဲ့သောအရာများ၊ ရှုထောင့်အသစ်များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဆရာကကျွန်ုပ်ကိုအကြံပြုသကဲ့သို့လူတိုင်းကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ မင်းသားလေးကသင့်ကိုဘာမှကမ်းလှမ်းစရာမရှိဘူးလို့ထင်ရင်တောင်ထပ်မံဖတ်ပြပါ ဦး ။
Carmen ပလာဇာ ဟုသူကပြောသည်
CARMEN PLAZA သို့စာပြန်ပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! ကျွန်ုပ်၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သားအတွက်တစ်ခုခုရှာဖွေနေသည်။
ကောင်းပြီ၊ Silvia ကိုကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်ဂူဂဲလ်ကိုသွားရပါလိမ့်မယ်။
sky taiz သို့ပြန်သွားရန်